Alakamisy 05 Desambra 2019. – FJKM
Alakamisy 05 Desambra 2019.
Hotohizantsika ny fanazavana
3-Ny famelana ny helok’Israely (and17-20)
Nahonena ny nanjo ny Isarely (and17). Rehefa nobaboin’ny Asyria ny foko 10 tany avaratra dia mbola noravan’i Nebokadnezara ihany koa ny foko 2 sisa tavela tany atsimo. Ireo fanjakana 2 ireo no indray novalian’ny Tompo , nefa famaliana mampody ny Zanak’Israely any aminy (and19). Tonga ny fotoana namelany ny heloky ny olony ka hihavanany amin’Israely, olony indray (and20).
4-Ny faharavan’ i Babylona (and21-32/35-46)
I Kyrosy no nalefan’ny Tompo hamaly an’i Babylona . Navoakany amin’izay ny tahirim-pahatezerany (and25) noho ny nandravana ny tempoly (and28). Nanampy trotraka izany ny fanompoany sampy(and38). Jereo anie : iza avy no asian’ny sabatra tanisaina eto?(and35-37)
5-Ny fanavotana an’ Israely
Mahery , tsy manam-paharoa , ilay mpanavotra ny Israely (and 34) ary Izy hampiadana azy .Izao no vaovao mahafaly : tahaka ny nandravana an’i Babylona ka nanafahana ny Zanak’ Israely no nitondrana ny mino avy tamin’ny fanjakan’ny maizina ho amin’ny famonjena manetriketrika tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompo (Lio 4.18,19) . Mitohy hatrany amin’ny bokin’ny Apokalypsy izany fandravana an’i Babylona izany .